Howlgalo dad badan lagu soo qabtay oo ay ciidanka NISA ka fuliyeen qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho. – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Howlgalo dad badan lagu soo qabtay oo ay ciidanka NISA ka fuliyeen qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho.
Howlgal culus oo ay ciidamada nabad-suggida qaranka ee NISA habeenkii xalay ka sameeyeen degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho ayaa waxa lagu soo qab-qabtay dad gaaraya 100 ruux, kuwaas oo sida la sheegay u badnaa dad dhalinyaro ah oo looga shakiyay Shabaabnimo.
Ciidamada nabad-sugidda ee NISA oo baaritaano dheeraad ah ku sameeyay dadkaasi oo u badnaa dad dhalinyaro ah ayaa ugu dambeyntii waxay kala soo dhex-baxeen saddex qof oo looga shakiyay inay xiriir toos ah la leeyihiin Xarakada Al-shabaab.
Saddexdaasi qof ayaa loo kaxeeyay xarunta dambi baarista ciidanka NISA ee ku taalo magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya, halkaasi oo baaritaano dheeraad ah lagu sii sameyn doono.
Dhinaca kale, saraakiil ka tirsan hay’adda nabad-sugidda qaranka ee NISA ayaa si hoose warbaahinta Bulshoweyn ugu sheegay in ciidamada nabad-sugidda ay howlgaladaan bilaabeen kadib markii laga war-helay in Al-shabaab ay qorsheynayso inay weeraro ka geysato xarumo dowladeed oo ku yaalo magaalada Muqdisho.
Sarkaalkaasi oo diiday inaa magaciisa u isticmaalno warbaahinta ayaa inoo xaqiijiyay in ciidanka nabad-sugidda ee NISA ay ku raad-joogaan kooxo kale oo la sheegay inay xiriir la leeyihiin Xarakada Al-shabaab, islamarkaana dhawaan gacanta lagu soo dhigi doono.
Si kastaba ha ahaatee, muddooyinkii ugu dambeysay ammaanka Muqdisho ayaa noqday mid faraha kasii baxaayay, waxaana maalmihii ugu dambeysay ay ciidanka NISA gacanta ku dhigeen gawaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo lala damacsanaaa in qaraxyo looga geysto xarumaha dowladda iyo goobaha ay bulshada isugu timaado, iyadoona haatan ciidanka NISA ay muujinayaan dadaalo dheeraad ah oo ay arrimahaasi uga hortagayaan.